Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Europe na-arụpụta na-erepịakwa ihe-apụghị ịghọta aghọta ego nke kọfị, ya nwere mma kọfị ụlọ ahịa na cafes na Europe. Ọ bụ a kọfị hụrụ Mecca na hoo haa, a ukwuu karịa nnọọ na. Cafe omenala bụ a window na ụwa. We seek out…
Oge Ọgụgụ: 5 nkeji Amsterdam bụ ihe dị ebube obodo nleta. E nwere ọtụtụ ihe ga-ahụ ma na-eme ebe a na ị ga-eleghị anya, mgbe ina gbụrụ. Otú ọ dị, ọ ka ga-abụ oké na mix ihe elu. That is because Amsterdam is a great starting point for several amazing…
Oge Ọgụgụ: 4 nkeji Street art bụ oge a na ụdị nkà okwu na-eme ka anyị obodo ọzọ mara mma. A ọma n'okporo ámá mural nwekwara ike-akpali gị na-eche banyere a mmadụ mkpa isiokwu ma ọ bụ na-echetara gị nke ọrụ oge gboo nwe. Cities of Europe are full of…
Oge Ọgụgụ: 3 nkeji Train njem na oyi na Paris na-abịa na ọtụtụ elele. Na mbụ, ọ bụ kasị ala ụzọ njem. The oche bụ saa mbara, ikwe gị ọzọ legroom karịa ị ga na a ụgbọelu. Going by train is also one of the safest ways to…